> Laws, decrees, bills and regulations relating to the environment (commentary)
Description/subject: "...While Burma may be taking steps in the right direction, the Burmese government is still far from being one of good
governance. Until the Burmese government develops its own sound policy framework to protect and sustainably
develop its natural resources inaway that meets ‘good governance’ guidelines, no amount of international
treaties or corporate regulation will mitigate the damage of natural resource development projects like the
Shwe Gas Project.
Until Burma’s internal framework meets these standards, foreign direct investment, particularly in extractive industries,
should not be an option. This isacall for all investors, corporations, stakeholder governments, intergovernmental
groups, and various others to utilize their means and authority to pressure the Burmese government.
Pending the necessary policy changes, all parties involved may be lacking the due diligence necessary to ensure
good global governance.
The following recommendations should be undertaken with the UN rights based approach asabasis, in which
‘people are recognized as key actors in their own development, rather than passive recipients of commodities
Title: Good Governance and the Extractive Industry in Burma: Complications of Burma’s Regulatory Framework (Burmese/ မြန်မာဘာသာ )
Description/subject: မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာနှင့်ပတ်သက်၍
လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ ခြေလှမ်းလျှက်ရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း၊ မြန်မာအစိုးရမှာ ကောင်းမွန်သည့် အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေး
စနစ် ဖြစ်ရန် အလှမ်းဝေးနေပါသေးသည်။ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ၎င်းကိုယ်၌က သဘာဝသယံဇာတများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရေရှည်
တည်တံ့စေရေးအတွက်၊ ‘ကောင်းမွန်သည့် အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်’ လမ်းညွှန်မူများနှင့် ကိုက်ညီသည့်၊ လျော်ကန်သော မူဝါဒအခြေခံ မူဘောင်တစ်ခုမချမှတ်နိုင်သမျှ ကာလပတ်လုံး၊ နိုင်ငံတကာ စာချုပ်စာတမ်းများနှင့် ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများ၏ စည်းမျဉ်းများက သဘာဝသယံဇာတများ အဟောသိကံဖြစ်ရမှု၊ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးနေရမှုကို လျှော့နည်း ကျဆင်းစေလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ရွှေသဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်းသည်လည်း ဤသို့ပတ်ဝန်းကျင်
ဆုံးရှုံးထိခိုက် ပျက်စီးစေမည့် စီမံကိန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း ဥပဒေမူဘောင်များက အထူးသဖြင့် သဘာဝသယံဇာတ ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများတွင် ဤသို့ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံနှုန်းများကို ပြည့်မီသည့်အခါမှသာ၊ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုသင့်ပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက စဉ်းစားဖွယ်ပင် မရှိပါ။ ဤအချက်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများ၊ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် အစိုးရများ၊ အစိုးရများ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အသင်းအဖွဲ့များနှင့် မြန်မာအစိုးရ
အပေါ် နည်းလမ်းပေါင်းစုံနှင့် ဖိအား သက်ရောက်စေသည့် အုပ်စုများအတွက်ကတိပြုရမည့် တောင်းဆိုချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်နေသည့် မူဝါဒ ဆိုင်ရာအရေးကို ဆိုင်းငံ့ဖင့်လေးထားပါက၊ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် အင်အားစုအားလုံးအနေဖြင့် ကောင်းမွန်သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုစနစ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် လိုအပ်ချက်တာဝန်များကို လျစ်လျူရှုထားသည့် သဖွယ် ဖြစ်နေစေပါလိမ့်မည်။ အောက်ဖော်ပြပါ အကြံပြုချက်များကို ကုလသမဂ္ဂ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ရှုထောင့်မှ ချည်းကပ်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
၎င်းတို့၏ ချည်းကပ်မှုအရ ‘ပြည်သူများကို သူတို့ကိုယ်ပိုင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရေးပါသည့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သူများဟု အသိအမှတ်ပြုကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အထောက်အပံ့ခံ အပြုခံများဟူ၍ မသတ်မှတ်သင့်ပါ။
Description/subject: Table of Contents:- 1. EXECUTIVE SUMMARY AND MAJOR FINDINGS …
2. HISTORICAL OVERVIEW ...
3. NATIONAL FOREST STRATEGY, POLICIES AND REGULATIONS:
3.1 The Myanmar Selection System and Annual Allowable Cut;
3.2 Forest Law and Policy ;
3.3 Forest Land Categories;
3.4 Community Forestry;
3.5 Impact of Forest Law Enforcement on Local People...
4. DEMAND: DOMESTIC DEMAND AND WOOD EXPORTS:
4.1 Domestic Demand ;
4.2 Exports ...
5. TIMBER SUPPLY: DOMESTIC PRODUCTION AND WOOD IMPORTS:
5.1 Domestic Wood Production;
5.2 Plantation Production...
6. FOREST INDUSTRY:
6.1 Myanmar Timber Enterprise;
6.2 Non-MTE Harvesting;
6.3 Medium-Sized Companies and Traders;
6.4 Value-Added Processing...
7. ILLEGAL TIMBER TRADE AND MYANMAR STANDARDS, NATIONAL CODES, TIMBER CERTIFICATION AND VERIFICATION SYSTEMS:
7.1 Illegal Timber Trade;
7.2 Progress towards Standards, National Codes, Timber Certification and Verification Systems ...
8. STAKEHOLDER ANALYSIS :
8.2 Timber Processing Industry: Private Sector and Quasi-Private Sector;
8.3 Civil Society;
8.4 Bilateral Donor Programs...
APPENDIX 1: MYANMAR TIMBER EXPORT PROCESS .
Description/subject: "...Environmental Legislation in Myanmar:
Even under the old laws which were made in the days when international
concern for environmental matters was less recognized than today, various
laws of Myanmar contained provisions relating to the environment. There
are 53 legal instruments in Myanmar. Some of these laws have been recently
formulated and contain wide ranging provisions for environmental protection
and conservation. However, there is stillaneed to modify or amend some
old laws and to formulate new laws that take into account the changing
economic situation in the country, the prevailing global environmental
concerns as well as the international environmental conventions and agreements to which Myanmar isaparty.
The several significant laws are as follows:-..."